Itaosy – Page 2 – Midi Madagasikara
Itaosy : Olona telo namoy ny ainy vokatry ny afon-tsaribao
Redaction Midi Madagasikara 30 janvier 2014 afon-tsaribao, Itaosy, namoy ny ainy
Araka ny vaovao marim-pototra voaray, olona telo no namoy ny ainy tao antin’ity volana janoary fiatombohan’ny taona ity,vokatry ny fahasemporana ao anaty trano mihidy noho ny fampiasana afon-tsaribao. Zava-doza tokoa mantsy ny ateraky ny gazy karbonika izay avoakan’ireny saribao fandrehitra ireny. Matetika dia vokatry ny tsy fahalalana na tsy firarahiana tsotra izao no mahatonga ny…
Itaosy : Manampy maty irery tao an-trano fiasany
Redaction Midi Madagasikara 28 janvier 2014 Itaosy, Manampy maty
Tomefy olona tokoa nanomboka ny alatsinainy atoandro tokony ho tamin’ny 11ora atoandro nahitana ny razana. Gaga sy talanjona mantsy ilay “patron” niasany raha tonga toy ny fanao mahazatra raha nahita ny fivarotana mbola mikatona ka nanontany tena hoe lasa maraina ve sa mbola matory ao an-trano. Marihina fa samy manana ny fanalahidy avokoa na ilay…
Itaosy : Enin-dahy nitondra basy nanafika, lasa ny vola
Redaction Midi Madagasikara 27 janvier 2014 Enin-dahy, Itaosy, nanafika, nitondra basy
Ny marainan’ny alahady tamin’ny 1 ora sy 10 minitra, notafihana jiolahy miisa enina nitondra basy vita gasy ny tokantrano iray teny Sahalemaka Ambaniala Itaosy. Ny loharanom-baovao no nahalalana fa nanao be fiditra ireto mpangalatra ireto. Raha vao toa an-trano izy ireo dia ny vola no nangatahany. Voambana basy ny tompon,-trano ary tsy afaka nihetsika. Voatery…
# – ITAOSY. Orinasa notafihan’ny jiolahy mitam-basy. Afak’omaly alina dia nidirana andian-jiolahy mirongo basy an-keriny tao amina orinasa iray teny Itaosy. Rehefa tafiditra ry zalahy dia nofatorany ny mpiambina ary noteren’izy ireo hovakiana ny vata fitehirian-javatra tao anaty birao, izay noheverin’ireo olon-dratsy fa misy ny vola. Tsy nety nisokatra anefa izany ka niala maina ireo…
Itaosy : Folo lahy nitondra “kalach” telo nanafika « épicerie »
Redaction Midi Madagasikara 23 novembre 2013 Itaosy, kalach, nafika épicerie
Na dia tsy nisy basy nipoaka aza, nihorohoro ny iray trano ary nanaraka izay nolazain’ny jiolahy Tsy alim-be akory fa vao tamin’ny valo ora alina dia efa mivoaka ny jiolahy mitam-basy. Miisa folo izy ireo raha araka ny fitantaran’ny voatafika. Mitondra basy lava, “kalachnikov”, ny telo tamin’ireo. Tsy nisy na inona na inona azo natao…
Itaosy : Vehivavy niboridana nofatoran’ny olona
Redaction Midi Madagasikara 23 novembre 2013 Itaosy, niboridana
Nolazain’ny olona fa mpamosavy ity vehivavy iray manodidina ny 30 taona. Ny anton’izany dia noho izy nitanjaka ary hita vao maraina be. Efa nitangorona ny olona, namatotra azy ary nihorakoraka. Teo amin’ny vodihazo izy no nafatotra ary saika niharan’ny fitsaram-bahoaka raha tsy tonga ny mpitandro ny filaminana. Teny Vinany-Itaosy no nitrangan’izany omaly vao mangiran-dratsy. Nentin’ny…